Iimaanka Runta ah Muxuu Yahay?
Sida lacag oo kale, iimaankaagu waa inuu run ahaado siduu qiime u yeesho
IIMAAN run ah wuxuu ka sii weyn yahay aqoonta Ilaahay inuu jiro. Dad aad u badan baa rumaysta Ilaahay oo haddana kas u sameeya shuqullo shar leh. Iimaanka sidaas ah wuxuu la mid yahay lacag been ah waayo run buu u eeg yahay laakiin qiime ma leh. Haddaba iimaanka runta ah muxuu yahay?
Iimaan run ah wuxuu ka dhisan yahay aqoon toosan oo ku saabsan Qorniinka Quduuska ah. Qorniinkan Quduuska ah wuxuu inoo sheegaa runta Ilaahay ku saabsan wuxuu inoo furaa jidka garashadiisa. Waxayna inoo muujiyaan Ilaahay sharciyadiisa, muraadkiisa iyo tacliintiisa. Tacliintiisa waxaa ka tirsan waxyaalahan:
Ilaahay waa mid. Mid la mid ahna ma jiro.
Ciise waa nebigii Ilaah, ma ahan Ilaaha Qaadirka ah.
Ilaahay wuu mamnuucay sanam caabudid.
Binuʼaadanku waxay arki doonaan maalin la xisaabin doono.
Kuwii dhintay in la tirin karin baa Jannada lugu soo nooleyn doonaa.
Iimaanka runta ah wuxuu ina siiyaa niyad aynu shuqullo wanaagsan ku qabanno. Shuqullada wanaagsan Ilaahay bay sharfaan. Innaga iyo dadka kaleba wax fiican bay inoo taraan. Shuqulladan wanaagsan waxaa ka tirsan
isku beeridda dabeecadda Ilaahay uu rabo, weliba jacaylka.
diidmada fekradaha iyo damacyada sharka leh.
inaad xajisatid rumaysadkaaga ad Ilaahay u qabtid markaad silic la kulantid.
dadka in Ilaahay la baro.
Iimaanka runta ah falal wanaagsan buu soo saaraa
Sidee baan iimaan run ah isugu dhisi karnaa?
Iimaanku wuu xoog bataa marka maalin kasta loo dhaqmo si qof iimaan leh
Weyddiiso Ilaahay inuu ku caawiyo. Nebi Muuse Ilaahay buu baryay oo wuxuu yiri: “Jidadkaaga i tus, inaan ku ogaado aawadeed, oo aad raalli iga ahaato.” * Ilaahay wuu maqlay oo wuuna u jawaabay baryadiisa. Wax baan ka baran karnaa Muuse iimaankiisa yaabka leh. Ilaahay adna wuu ku caawin doonaa sidaad iimaan run ah u kordhisatid.
Waqti sameyso ad ku baratid Qorniinka Quduuska ah. Qorniinkaas oo ka yimid ruuxa Ilaahay waxaa ka tirsan kutubta Tawreed iyo Sabuur iyo Injiil, iyaga oo dhan waxay ka mid yihiin Kitaabka Quduuska ah. Kani waa buugga luqadaha ugu badan lagu turjumay oo adduunkoo dhan lagu faafiyay. Adigu miyaad haysataa Qorniinkan Quduuska ah?
Talada Kitaabka Quduuska ah maalin kasta isticmaal. Sida ciyaartoy tababbartay u xoog weynaado buu iimaankaagu u kordhaa markaad maalin kasta u dhaqantid si qof iimaan leh. Toos baad u arki doontaa inay Ilaahay taladiisu guul gaarto. Runtii, talada laga helo Qorniinka Quduuska ah dad tiro badan baa ka faaʼiidaystay. Bal sii akhri sidaad u aragtid tusaalooyinka soo socda.
^ qayb. 17 Baxniintii 33:13.
Iimaan run ah muxuu ka dhisan yahay?
Iimaanka runta ah shuqulladee buu sababaa?
Sidee baad iimaan run ah u yeelan kartaa oo u kordhisan kartaa?
Ilaahay Eraygiisa wuu ilaaliyaa
Waxaa cad inuu Ilaahay Qorninkiisa Quduuska ah daafacay sidaynu maanta Eraygiisa daahirka ah u akhrisanno. Ilaaha Qaadirka ah buuggiisa quduuska ah wuu ilaalin karaa. Eraygiisa waxaa ku qoran: “Cawsku wuu engegaa, ubaxuna wuu dhacaa, laakiinse erayga Ilaaheennu weligiisba wuu waari doonaa.”—Ishacyaah 40:8.
Wadaag Wadaag Iimaanka Runta ah Muxuu Yahay?